Habab Haweeney Walba Oo Dunida Ku Nool Ay Ku Uureysan Karto Muddo 24 Usbuuc Ah. - Hablaha Media Network
Habab Haweeney Walba Oo Dunida Ku Nool Ay Ku Uureysan Karto Muddo 24 Usbuuc Ah.
HMN:- Dhibaato ayey ku tahay lamaanaha sii kordhaya iney si fudud ku noqdaan qoys ama reer carruur leh sida markii horeba la filayey.
Haddii ay ahaan laheyd ugxanta haweeneyda oo bacrimin weysa lagana helo hoormoonkla loo yaqaano polycystic ovary syndrome (POS),Ãƒâ€šÃ‚Â Speermaha oo aad u yardaada, bacrimin la’an aan la sharxin iyo arrimo kale oo badan ayaa dadka ku qasba go’anno wadna jebis ah oo ay hantidooda ku bixiyaan bacriminta lagu sameeyo sheybaarka ee loo yaqaano In Vitro Fertilization (INV), amaba in ay ka quustaan guud ahaan riyooyinkoodii ahaa in ay nolol qoys oo wada jir ah sameeyaan.
Hab cusub ayaase dunida ku soo kordhay oo lagu magacaabo ‘Neuroscientific Fertility Treatment’ kaasoo la sheegayo inuu abuurayo natiijo muddo 24 usbuuc ah gudaheed.
Hab daweedkan cusub ayaa diiradda saaraya inuu ka qaado maanka ama maskaxda caqabadaha ka hor iman kara in haweeneydu uureysato amaba uu yareynayaa cadaadiska Hoormoonka loo yaqaano Cortisol, C21H30O5; Hoormoonkan ayaa xukuma hab dhiska Carbohydrateka siina kordhiya cadaadiska dhiigga, wuxuuna hor istaagaa hab sami socodka uureysiga.
Waxaa barnaamijkan hal abuuray, Dr Michael Arnold. Barnaamijkan ayaa dhamaantis ah wax dabiici ah, marka loo eego Dr Arnold oo isagu ka helay heerka guusha barnaamijka tiro u dhaxaysa 66 ilaa 77% taasoo ku xiran sababta bacrimin laÃƒÆ’Ã‚Â¡anta uu ka hadlay.
Dhowr Hab Uu Ka HadlayÃƒâ€šÃ‚Â Dr Michael Arnold.
SAMEE GALMO SAX AH
Cilmi baaris ayaa muujineysa in lammaanaha sameeya galmada saxda ah ( Ugu yaraan 3 jeer usbuucii) ay laba laabi karaan fursadaha ay u heystaan in uureysi ka dhex dhaco. Lammaanaha galmda sameeya xilliga ugxantu dibadda u soo baxeyso ugxanÃƒâ€šÃ‚Â sidaha ayey waqti dheer ku qaadataa uureysiga.
Si aad u kordhiso qaadashada nafada waxa aad raacdaan oraahda dheheysa Quraacdu waa Boqor,Qadadu Waa Amiir, Cashaduna waa Maskiin (waxba heysan).
Xigmad shiineeskii hore ayaa aheyd ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…â€œ11pm waa bilowga waji cusub iyo maskax iyo muuqaal dhalinyaro ah.
Dhibaato wayn kuuma laha inaad hurudo ka dib 11pm laakin waxaa ogaataa haddii aad daai’mto in aad soo jeeddo 11pm ka dib jirkaadu maheli doono faaidooyinka laga helo caafimaadka hurdada.
SAMEE JIMICSI MUDDO 30 DAQIIQO AH, 3 JEER USBUUCII
DHEELLITIR KU SAMEE DUFANKA (FAT) JIRKAADA
KOFEEGA IYO ALKOLADA